Zingaphi iikhalori ezitshisiweyo ngokwenza iYoga Sculpt? - Iindidi E Yoga
Zingaphi iikhalori ezitshisiweyo ngokwenza iYoga Sculpt?
Njengolunye uqeqesho, i-yoga sculpt iyatshisa iikhalori, kodwa zingaphi ezixhomekeke kwizinto ezininzi. Nangona kunjalo, ngokubanzi uya kuphinda nje kabini isixa ositshisileyo kwiklasi yesiko yeyoga.
Ukufumana iNqanaba lokuTshisa
Ngelishwa, iikhalori ezikhoyo kunye neetshathi ziyasilela ukubandakanya iiklasi zeyoga ezijolise kuqeqesho. Kuba iyoga sculpt iyafana ngamandla kunye nobude ukuyauqeqesho lweseketheokanyeithuba eliphezulu lokuphumlaindlela yokusebenza, enika indibaniselwano yeamandlakwayeukuzilolonga kwe Cardio, yeyona ndlela ilungileyo yokwazi ukuba zingaphi iikhalori ozitshisayo kukujonga amanani ezi modalities. Ngokwenqaku elibhalwe ngu Isikolo seHarvard Medical , Uya kuba phakathi kwe-240 ukuya kwi-355 yeekhalori kwimizuzu engama-30 kuxhomekeke kubunzima bakho bangoku. Nantsi itshathi yokukunceda ufumane inani leekhalori ozitshisayo.
zeziphi iimpawu ezihambelana ne-virgos
Iikhalori ezitshisiweyo kwiYoga Sculpt (ngokobunzima nexesha)
209 313 417
227 340 454
245 367 490
263 395 526
281 422 562
318 476 635
336 503 671
354 531 708
Umzobo weYoga: Iyintoni kwaye uyilungiselela njani
Zingaphi iikhalori ezitshisiweyo kwiyoga ngesitayile?
ICorePower Yoga: Isikhokelo sabantu abatsha abazimasa
Abantu abanobunzima obungaphezulu batshisa ngaphezulu kweekhalori. Ngoku ka Ikliniki yaseMayo , Kungenxa yokuba bachitha amandla amaninzi kunalawo aneentsimbi ezisezantsi zomzimba.
Ukuzivocavoca umzimba kweYoga
Isixa esithile seiikhalori ozitshisayoNgexesha leklasi yakho kuya kuxhomekeka kwimithambo uqeqesho olo lubandakanya olo suku. Ukuzivocavoca kunokubandakanya nayiphi na imisebenzi emininzi kubandakanyaukuphusha usenyuka,squats,iiplanga, kunye nezinye iintshukumo.
Ukuhamba okunyanzelekileyo, okanye iintshukumo ezibandakanya ngaphezulu kweqela elinye lemisipha (okt pushups kunye squats), kunye nokuzivocavoca okusebenza izihlunu ezikhulu (okt iibhlorho ezinobuzaza) zitshisa ngaphezulu kunalezo zisebenza izihlunu ezincinci (okt i-bicep curls kunye nokuphakama komva). Kuba uninzi lweeklasi zokwenza i-yoga ubambe i-yoga ngelixaukuphakamisa iintsimbi, uhlala ufumana ezona zilungileyo kuzo zombini.
Enye into echaphazela inani leekhalori ozitshisayo ngexesha leklasi kukuqina apho ugqibezela khona umthambo.
Uhlengahlengiso -Ukuba imithambo eyisiseko inocelomngeni kwaye ufumanisa ukuba uyiguqula, oku kuya kunciphisa amandla kunye nokuhlisa ikhalori yakho. Imizekelo ibandakanya ukugcwalisa i-pushups emadolweni akho, ukhetha ukugcina iinyawo zombini emgangathweni ngexesha lebhulorho yomlenze omnye, okanye ukusebenzisa i-dumbbells ezikhaphukhaphu kunokuba zicetyisiwe.
Inkqubela phambili -Ukuba uthatha ubungqongqo bomthambo ngamnye ngokukhetha iinguqulelo ezinzima kakhulu, ukunyuka kokuqina kunye nenani leekhalori zitshisiwe. Ukugcwalisa i-pushup emlenzeni omnye ngokuchasene nemibini okanye ukubamba ubunzima ngexesha lomda endaweni yokwenza isitayile sobunzima bomzimba yimizekelo emihle.
Plyometrics kunye neCardio - Ezinye iiklasi ze-yoga zibandakanya i-plyometric kunye ne-cardio ngakumbi kunabanye. Okubandakanyiweyo kolu luhlu kukuxhumaxhuma, ukutsiba squat, ukunyuka intaba, ukutsiba kwejack, kunye neendlela ezahlukeneyo zokukhaba kwebhokisi. Batshisa iikhalori ezininzi ngomzuzu kunamandla abo asekwe kumandla.
Umahluko womntu ngamnye
Izinto zokugqibela kwi-calorie burn equation ngumahluko ngokwahlukeneyo.
Ubudala Ngo-2016, i Iindaba zeU.S. kunye neNgxelo yeHlabathi Ubhale isiqwenga esichaza indlela imetabolism eyehla ngayo njengoko abantu bekhula. Oku kungenxa yokutshintsha kweencindi zamadlala ezinciphisa isixa sobunzima besisipha onaso ekuhambeni kwexesha. Isiphumo kukuveliswa kwamandla amancinci, okulingana neekhalori ezingaphantsi.
Inqanaba lomsebenzi wangoku - Abantu abanjalongokumaNgokwendalo baya kuchitha amandla amancinci besenza umsebenzi ofanayo njengabo bafunda nabo eklasini abanokuphuma ngaphandle okanye abatsha kwifomathi yoqingqo lweyoga. Ixesha elingaphezulu, njengoko uqhela ukuzilolonga, kuyakufuneka wandise amandla akho ukuze ugcine amanqanaba ekhalori atshisa kakhulu.
Eyona ndlela yokwazi ngokuqinisekileyo ukuba utshisa kangakanani ukunxibaisixhobo sokulandela umkhondo womsebenziokanye usebenzise iikhawuntari yekhalori.
Tshisa ngakumbi ngeYoga Sculpt
Unokwakha ngokuthe ngqo izihlunu, ukubila ngakumbi, kunye nokutshisa iikhalori ezininzi ngexesha le-yoga eqingqiweyo kunodidi lwakho lweyoga. Yongeza kwisiqhelo sakho kanye ngeveki ukuze uzicelomngeni ngokwasemzimbeni ngokudibanisa kwamandla kunye ne-cardio. Isitudiyo sakho sasekhaya sinokukunika phantsi kweli gama okanye enye into efana neyoga yesisele okanye ukutshiswa kweyoga.
Cocktail Iindlela Zokupheka Fiction Ukubhala Impembelelo Esezantsi Ikhadi Making Ibhdi Nesidlo Sakusasa
Ungaqala njani incoko kunye nentombazana kwi-Intanethi
unikela ntoni kwitheko lothethathethwano
eyona injini yokukhangela yokufumana abantu
uneminyaka emingaphi onokuzibandakanya ngayo
ukuphakama okuphakathi komfazi oneminyaka eli-15 ubudala ezinyaweni
ungawasusa njani amabala amanzi amnyama kumgangatho okhuni